Wargeyska Charlie Hebdo oo dib u daabacay sawir gacmeed laga sameeyay Nebi Maxamed (NNKH) | Baligubadlemedia.com
Wargeyska Charlie Hebdo oo dib u daabacay sawir gacmeed laga sameeyay Nebi Maxamed (NNKH)
September 2, 2020 - Written by admin
Dhageysiga dacwadda ragga loo heysto inay caawiyeen dableydii weerarka fulisay ayaa maanta bilaabaneysa
Wargeyska qaabka maadeysiga wax u qora ee kasoo baxa Faransiiska ee Charlie Hebdo ayaa dib u daabacay sawir gacmeed laga sameeyay Nebi Maxamed (NNKH), tallaabadaas oo sanadkii 2015-kii u horseeday in lagu qaado weerar dhimasho geystay.
Waxay arrintani imaaneysa maalin uun ka hor xilli la filayo in maxkamad ay kasoo hor muuqdaan 14 qof oo looga shakiyay inay caawinayeen labadii qof ee weerarka ku qaaday xarunta wargeyska.
Waxaana weerarkaas lagu dilay 12 qof oo ay kamid yihiin farshaxamiistayaal caan ah, waxaana sidoo kale maalmo kaddib Paris ka dhacay weerar kale oo ay ku dhinteen 5 qof.
Bogga hore ee wargeyska ayaa lagu daabacay 12 sawir gacmeed oo laga sameeyay Nebiga kuwaas oo lagu daabacay wargeys kasoo baxa Denmark ka hor inta aysan kasoo muuqan Charlie Hebdo.
Wargeyska ayaa ku dooday in marar badan laga codsaday in uu soo daabaco sawir gacmeedka tan iyo markii uu dhacay weerarkii 2015-kii.
“Mar kasta waan diidin jirnay, sababtuna ma aheyn in mamnuuc ay tahay daabicidda- sharciga ayaa inoo ogolaanayaa in aan daabacno sababta oo ah waan in la helaa arrin macquul ah oo sabab u ah arrintaas oo micno sameyneyso taas oo dhalineyso dood”
“In dib loo soo saaro sawir gacmeedka xilli lagu gudo jiro toddobaabka dhageysiga dacwadda ku saabsan dadkii lagu tuhunsanaa weerarkii argagixisada ee dhacay bishii Jannaayo sanadkii 2015-kii, waxay arrintaas ka dhigeysaa in laga maarmaan ay inoo tahay”
Maxaa laga filayaa maxkamadeynta?
Afar iyo toban qof oo lagu soo eedeeyay in hub iyo caawimaad ay u fidiyeen kooxdii weerarka ku qaaday xafiisyada wargeyska Charlie Hebdo iyo weeraro kale oo ka dhacay Paris ayaa maanta maxkamadda kasoo hor muuqaanayaa.
Xarunta laga dukaameysto ee The Hyper Cacher oo ay weerarka ku qaadeen dableyda bishii Jannaayo 2015-kii waxaa ku dhintay afar qof
Saddex kamid ah raggaas ayaa dacwaddooda la dhageysan doona iyagoo aan maxkamadda joogin, waxaana la rumeysan yahay inay u carareen dhinaca waqooyiga Ciraaq iyo Suuriya.
Waxaana la filayaa in maxkamadda ay tegaan ilaa 200 qof oo dacwadda gudbiyay iyo sidoo kale dadkii ka badbaaday weerarka si ay caddeymaha u horgeeyaan maxkamadda, sida uu ku warramay Raadiyaha Faransiiska ee RFI.
7-dii bishii Jannaayo ee sannadkaas, labo nin ayaa weerar ku qaaday xafiisyada wargeyska Charlie Hebdo uu ku lahaa magaalada Paris ka hor inta ay rasaas ku furin shaqaalaha wargeyska.
Tafatirihii wargeyska Stéphane Charbonnier iyo afar kamid ah shaqaalaha ayaa lagu dilay weerarka.
Dableydii weerarka soo qaaday waxaa markii dambe dilay saraakiisha booliska, waxaana weerarkaas ku dhintay 12 qof.
Maalmo kaddib, nin hubeysnaa ayaa weerar kale ku qaaday xarun dadka yuhuudda ay dukaameystaan oo ku taalla bariga Paris, waxaana halkaas ku dhintay 4 qof, booliska ayaa markii soo afjaray weerarka, waxay dileen ninkii weerarka soo qaaday.
Maxaa loo beegsaday Charlie Hebdo?
Farshaxankii laga sameeyay Nebiga (NNKK) ayaa horseeday in Charb tafatirihii wargeyska loogu hanjabo dil, ka hor inta uusan weerarka ku dhiman waxaa 24- saac ilaalin jiray ciidamada booliska, sanadkii 2011-kii ayaa qarax lagu weeraray xafiisyada wargeyska.
Charb wuxuu si weyn u difaacay daabicidda sawir gacmeedka oo uu ku tilmaamay astaan muujineyso xoriyatul qowlka.
“Lama yaabani in sawiradeena aysan ka farxin muslimiinta” wuxuu sanadkii 2012-kii u sheegay wakaaladda wararka ee AP “Waxaan ku hoos noolahay sharciga Faransiiska ee kuma hoos nooli sharciga Qur’aanka”